Jubbaland oo ciidamo u dirtay deegaano ay Al-Shabaab kula dirirtay dad xoolo dhaqato ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandJubbaland oo ciidamo u dirtay deegaano ay Al-Shabaab kula dirirtay dad xoolo dhaqato ah
December 27, 2016 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Jubbaland oo ciidamo u dirtay deegaano ay Al-Shabaab kula dirirtay dad xoolo dhaqato ah. [Xuquuqda Sawirka: Puntlandi]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Maamul goboleedka Jubbaland ayaa ciidamo boqolaal ah u diray deegaamo ay dhawaan ku dagaalameen dad xoolo dhaqato ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam sidoo kale ah taliyaha ciidamada Jubbaland ayaa amar ku bixiyay in cutubyo ciidamo ah loo diro galbeedka gobolka Jubbada Hoose si ay u garab istaagaan dadka shacabka ah ee maleeshiyada dagaalka kula jira.
Dagaal culus oo u dhaxeeyay dad xoolo dhaqato ah iyo Al-Shabaab ayaa asbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay galbeedka gobolka Jubbada Hoose, dagaalka ayaa qarxay kadib markii ay Al-Shabaab dadka ku khasbeen in ay Sako ahaan u bixiyaan xoolo tiro badan.
Dagaladaas ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo toban qof oo labada dhinac oo dirirtu dhexmartay ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaamada ay maamulaan mar walba ku khasba in ay sako ahaan u bixiyaan xoolo tiro badan.